Ịnyeghachi Akụkọ Mmalite Nke Na-adịghị. 6 - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Mba 6 Mmiri 2018
Nabata na mbipụta nke Nsolite 6 nke na-akwụ ụgwọ akụkọ. Anyị nwere ọtụtụ akụkọ na akụkọ maka gị. Nọgide na-eji nri Twitter anyị na-eme kwa ụbọchị na blọọgụ kwa izu na ibe ụlọ.
A na-ewere onyinyo a nke okooko osisi cherry dị mma na elu Washington DC mgbe ọ bụla nzukọ ụwa dum anyị banyere ebe ahụ na mbido April. N'ụzọ dị ịtụnanya, anyị na-eto eto kachasị elu ebe a na Edinburgh ụbọchị ole na ole gara aga.
Ihe niile nzaghachi bụ nke na-amasị Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Iwu Nchekwa Data General
Ndị dọkịta na-akwado ihe anyị chere
Kpọọ na Cambridge!
Nzukọ Mba Nile nke 5th na Ọgba aghara
Na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ
Mmekọrịta iji kwụsị Mmekọrịta Mmekọahụ, Washington DC
Wardọ aka na ntị Porn - “Ememe Nkiri” nke Onwe
Ọka Grey na Mkpọrọ Mkpọrọ
Facebook na Youtube
Mmekọahụ Mmekọahụ-Porn-Porn, dị ka BBC
Ọhụụ nke afọ UK
Ọsọ dị mwute
Ihe na-aga n'ihu
O doro anya na ị na-enweta akwụkwọ edere site na ọtụtụ òtù ndị ị na-akpakọrịta na ịrịọ gị ịbanye na nchekwa data ha. Ọfọn, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị nụ site na Nkwụnye Ụgwọ Ụgwọ ahụ, ị ​​ga-anakwere arịrịọ ị ga-enweta n'aka anyị na ụbọchị ole na ole na-esote. Anyị nwere olileanya na ị ga-eme ya!
Anyị na-agba ọsọ nke mbụ nke usoro Royal Royal nke General Practitioners-accredited, na-ehihie otu ụbọchị na mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na uche na ahụ ike na Edinburgh n'izu a. Ihe atọ na-esonụ ga-eme na London, Manchester na Birmingham na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị GP na-abịa egosiwo ihe anyị chere - na ha ahụwo mmụba dị elu nke ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke na-arịa ọrịa na-eweta nrụrụ mmekọahụ dị ka 'oge ejaculation na-egbu oge' (mgbe ọ na-abụkarị ihe zuru oke nke nrụrụ erectile), anorgasmia (enweghi ike ka orgasm) na nrụrụ erectile n'onwe ya.
Nke a mere na afọ ole na ole gara aga ma daba na nnweta zuru oke, hardcore porn na smartphones na mbadamba. Enwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ na-atụnyekwa ya, ma ego anyị maka onye isi na-eme ihe na-adabere na ntaneti ịntanetị na-enweghị isi.
Ndị dọkịta maara na Viagra na ọgwụ mmezi yiri nke ahụ, anaghị arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ọnọdụ iji belata nsogbu ahụ. Ihe kpatara na ha anaghị arụ ọrụ bụ na nsogbu ahụ "adịghị n'okpuru eriri", ya bụ, ọbara na-asọba na akụkụ ahụ dị mkpa nke akụkụ ahụ nwoke, mana ọ bụ maka nkwụsị nke mgbaàmà mgbaàmà sitere na ụbụrụ "na une" ha. Ọ bụrụ na ị hụghị okwu TEDx na-akpali akpali ma na-enye nkọwa TEDx "Mkparịta ụka Ukwu Porn" na nke a, lee ya Ebe a.
Ihe ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike na-amụta site n'ọmụmụ nrịbawanye na-arịwanye elu, na ihe ijuanya ha, bụ nke ahụ porn-induced nkwụsị nke erectile bụ 'ihe', ma dị iche na nsogbu nke erectile na-emetụta ọtụtụ ndị agadi. Nke a isiokwu akọwa ihe dị iche. Lee kwa a ngosi na azụ na ED na nza nke nkwado sayensị.
Biko banye na ụlọ akwụkwọ anyị fọdụrụ ma ọ bụrụ na ị dị na ọkwa dị mkpirikpi ma ọ bụ ka ndị ọrụ ibe gị mara. Anyị ga-akpọ mgbasa ụbọchị n'ọdịnihu n'oge mbubreyo 2018.
Onye isi oche nke onyeisi obodo Lucy Cavendish College, Cambridge, Jackie Ashley akpọwo onyeisi anyị CEO Mary Sharpe. Guardian onye edemede na nwunye nke onye mgbasaozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị Andrew Marr) ikwu okwu banyere mmetụta nke ịntanetị na-emetụta ụbụrụ nwa na-eto eto na Thursday 7th June 2018. Lee Ebe a maka nkọwa ndị ọzọ. Ọ bụ ihe omume n'efu. Bịa ma ọ bụrụ na i nwere ike.
5th Nzukọ Mba Nile Maka Ịgba Ahụhụ
Onyinye Ụgwọ Ụgwọ ahụ nwere obi ụtọ ịme ka ọ malite ikwu okwu na ọkwa ICBA ogbako na-ewere ọnọdụ na Cologne, Germany 23-25 ​​Eprel. ICBA na-eweta ndị ọkà mmụta banyere akwara na akparamàgwà mmadụ si gburugburu ụwa iji gosipụta nyocha ọhụụ banyere ị addicụ ọgwụ ọjọọ. Ihe omume TED na-eri obi gị! Nke a bụ ebe a ga-achọta ezigbo ihe ga-eme. Prọfesọ Stark kwuru okwu nkowa nke na-achikota usoro nyocha nke sayensị gbasara mmetụta nke ikiri ihe gba ọtọ. Ọ bụ ezigbo masterclass.
Darryl Mead gosipụtara ọrụ ọrụ ebere na nkwurịta okwu ọha na eze banyere mmetụta nke ịntanetị na ọha mmadụ taa. Ọ na-ekwu maka atụmatụ nkuzi anyị dabeere na ntụrụndụ na ụlọ akwụkwọ, nyocha maka ndị ọkachamara ahụike, ndị ọkàiwu, ndị ọrụ ọha na eze na ndị nkụzi na ime ka ndị ọkà mmụta sayensị nweta enyemaka nke ndị chọrọ ya. Nke a gụnyere nyochaa akwụkwọ sayensị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na ogbako ICBA nke afọ gara aga na Israel.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akwụkwọ a na-enyocha ndị ọgbọ, anyị nwere ike inye gị njikọ nke ga-enye gị ohere ibudata akwụkwọ ahụ site n'aka onye nkwusa. Nkwekọrịta mbipụta ahụ na-enye ohere ịnweta nọmba ole na ole n'efu. Anyị na-atụ anya ka anyị na-ebipụta nyocha ọhụrụ nke dabeere na akwụkwọ 2018 ogbako ahụ na e mesịrị na afọ nke akụkọ ahụ Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi.
Ọ bụrụ na ị bụ dọkịta maọbụ na ịchọrọ ịchọta otú ị ga - esi nwee ike ịchọta porn, ị nwere ike ịhụ uru na ngwá ọrụ ọhụrụ a na - akpọ Brief Pornography Screener. Ọ bụ otu n'ime akụ ndị e kpughere na ogbako ICBA afọ a. Maka afọ gara aga anyị na-atụ aro maka ogologo oge, ihe nchịkọta zuru ezu na-akpọ Ihe ndi na-ese foto na-adighi ike nwere ajụjụ 18, mana ngwa ọrụ ọhụụ a nwere naanị ise. Na Na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ele anya dị ka ihe dị ịrịba ama n'inye General Practitioners ngwá ọrụ dị ngwa iji mee ihe n'ime oge NHS nkịtị.
Anyị nwere obi ụtọ inwe ike itinye aka na nke a dị ịtụnanya Nzukọ Global tinyere ndị ọkachamara 600 na ndị nkụzi site na isi ụlọ ọrụ gburugburu ụwa. Mkparịta ụka na-ebi ndụ na Facebook ma ka dị na ntanetị. Ị nwere ike ịnụ Prọfesọ Gail Dines, onye nchoputa Culture Reframed *, kọwaa ihe dị ichen'agbata ndi nwanyi na ndi nwanyi na ndi nwanyi, ndi bu ndi na-eme ka ha na-egwu egwu, nke a bu pro-porn.
I nwekwara ike gee obi n'obi na-ezisa akụkọ banyere nne nke nwa nwanyị 15 dị afọ iri na isii na-eji ejiji nke nwa agbọghọ 15 nke ọzọ, jidere ma kpọsaa otu ụbọchị dị ka 21 afọ na Backpage.com, saịtị maka inwe mmekọahụ ndị ọrụ, ọtụtụ n'ime ha ka e si zụọ ahịa. Ọtụtụ ndị nwoke dinara ya n'ike tupu ndị jidere ya mara na mama ya kpọtụrụ ndị uweojii na-agakwuru ha. A hapụrụ ezinụlọ ahụ na-ebubata akụkụ ahụ na nwa nwanyị nke na-enwetụbeghị ụdị nsogbu ọ bụla na mbụ ma bụrụ ezigbo nwa akwụkwọ. Ọ dị ka Jane DOE (no. 3) ihe nkiri vidio gbasara ahia ahia ndi mmadu.
Anyị nọkwa na-arụsi ọrụ ike. Anyị na-ahazi nzukọ na Ihe Omimi na Ọha na Ahụike Ọha na mmadụ iri ise si n'akụkụ ụwa niile lelee ụzọ dị iche iche ma kesaa echiche banyere omume kacha mma. Anyị chịkọtara ụfọdụ ozi bara uru anyị tinyeworo na akụkọ maka nzukọ NCOSE n'ozuzu ya. Anyị nyekwara akwụkwọ na-egosi ụzọ ọhụụ maka ịdọ aka na ntị ahụike nke enwere ike igosi tupu mmadụ ele porn, dị ka ịdọ aka na ntị na akpa sịga. More na nke a na ihe na-esote n'okpuru.
Mụ akwụkwọ si Mahadum nke Edinburgh's College of Art tinyere ihe ngosi pụrụ iche maka Foundation Reward Foundation na Eprel. Dị ka akụkụ nke mgbalị anyị ịmatakwu banyere nsogbu ndị na-emetụta ọha mmadụ taa na iji ihe ndị gba ọtọ, anyị echepụtala itinye ịdọ aka ná ntị ahụike na mmalite nke oge porn, dịka ịdọ aka ná ntị ahụike na ngwugwu sịga. Iji mee ka echiche a nwee ọ ,ụ, obi dị anyị ụtọ inwe ohere izute ụmụ akwụkwọ na-ese ihe nkiri na Mahadum nke Art nke Mahadum Edinburgh. Ọrụ ha bụ ịmepụta ihe nkiri 20 ruo 30 nke abụọ nwere ike iji n'ụzọ dị otú a. Ọ bụ ọrụ bụ akụkụ nke ọrụ ha ma ha jiri nnukwu ịnụ ọkụ n'obi wee jee ya.
Ihe si na ya pụta bụ ihe na-ewe ume. Ọ bụ ihe ùgwù dị mma ka a kpọọ anyị ka anyị nọrọ site na mmemme nkeonwe onwe anyị na ihe ngosi 12 site na ụmụ akwụkwọ ndị a nke kere ihe. Di iche iche na mmetụta dị oke egwu. Obi dị anyị ụtọ mgbe ahụ gosi isii n'ime ha ka ha karịa ndị 200 bịara mgbakọ ahụ ike ọha na eze maka imekorita nwoke na nwanyị na Washington ebe a nabatara ha nke ọma. Ụfọdụ ndị na-eme iwu na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ na-achọsi ike ịgbaso ọrụ a.
Mary Sharpe laghachiri Ndụ Nolan na BBC Northern Ireland na 7th Machị 2018. Njikọ a ga-akpọrọ gị gaa vidiyo zuru oke nke akụkụ a nke ngosi ahụ. Mary kwusiri ike banyere mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ahụike na ahụike nke ụmụaka na onye ọbịa bụ Stephen Nolan, ya na onye na-egwu egwuregwu porn na onye na-agbake ọgwụ ọjọọ.
Dịka e kwuru na akwụkwọ akụkọ gara aga, n'afọ gara aga, a họpụtara onyeisi anyị bụ Mary Sharpe ka ọ bụrụ onye akpakọrịta nke CYCJ dabeere na Mahadum Strathclyde na Glasgow. O nwere obi uto inye okwu nwa ya nwanyi n'umu "Impa nke Intanet ihe omimi banyere ndi di na nwa" n'oge ogbako ha kwa afo n'isiokwu nke Ọka Grey na Mkpọrọ Mkpọrọ. Nke a mere n'otu ụbọchị ahụ dị ka ihe nkiri TV Nolan Live na Belfast.
Ihe ngosi nke ihe ngosi nile di Ebe a na okwu Meri bidoro na P.85-end. Ọ bụ ohere dị ukwuu izute na ịkekọrịta echiche na ndị ọzọ na-eme nchọpụta na ndị ọkachamara bụ ndị nwere oke miri emi na ọmụmụ nke ikpe mpụ na Scotland taa.
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa Facebook ọhụrụ anyị bụ nke na-elekwasị anya na ogbako anyị na-akụzi na ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Enweghi ike ijikọta anyị Ebe a.
I nwekwara ike inwe mmasị na obere nhọrọ nke vidio anyị nwere ugbu a na ọhụrụ anyị YouTube chanel. E nwere ọtụtụ vidiyo ndị ọzọ na-abịa dị ka anyị nwere ugbu a atụmatụ iji dezie ọtụtụ ajụjụ ọnụ anyị na ndị ọkachamara na-edekọ gburugburu ụwa.
Ọrụ ebere nke afọ gara aga Kwuo kpọrọ NHS ka o mee ihe ndị ọzọ iji nyere aka na ibu arọ nke ndị na-achọ enyemaka maka "mmekọahụ riri ahụ". Ọ bụ nkụda mmụọ ịhụ akụkọ akụkọ BBC na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ na-elekwasị anya na 'ịṅụ ọgwụ ọjọọ' dị ka ndị dị otú a, nke ahụ bụ ike imegide ndị ọzọ, kama ịhụ egwu na egwu egwu. Ruo mgbe ọ dị mfe ịnweta hardcore porn wee bụrụ n'efu na ngwa ngwa site na netwọk dịka 10 afọ gara aga, ọ bụ ntakịrị ntakịrị ka a na-ejikarị porn eme ihe na ịzụlite ọgwụ na ịgwọ ọrịa.
Otú ọ dị ijikọta mmekọahụ riri ahụ na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ taa abụghịzi ihe kwesịrị ekwesị, ọ bụghị ma ọ dịghị ihe ọzọ dị ka ọtụtụ ndị na-eto eto porn taa bụ ụmụ agbọghọ. Ọ bụkwa ọgba aghara nke ndị na-ahụ maka mmekọahụ na-ejikwa ya. Ha na-ahọrọ ileghara sayensị anya na-arị elu ma na-ekwusi ike maka ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ dịghị ihe dị ka mmekọahụ ma ọ bụ ị addictionụ ọgwụ ọjọọ. Kama nke ahụ, ha na-agbanwezi mkparịta ụka nke mgbasa ozi nye ndị a ma ama dịka Harvey Weinstein ma ọ bụ Tiger Woods na-ekwu na ọ bụ naanị ngọpụ nke ọgaranya maka omume ọjọọ. Ma o doro anya na ma ọ dịkarịa ala akwụkwọ 3 na-eme nchọpụta na ogbako ICBA na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nwere nsogbu ịkwa iko na-enwe nsogbu nwere iji ike egwu egwu egwu, kama ịga ndị ọrụ mmekọahụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya.
A nkwenye nke ndị ọkà mmụta na Lancet kwado ụdị nyocha ọhụụ nke ``, nke ga-agụnye ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, maka nsonye na World Health Organisation na nso nso a-mbipụta International Ọrịa nke Ọrịa 11th. Mgbe ebipụtara nke ahụ, a ga-ekpughere ọgba aghara a.
Ọ na-eche na ohere ịnweta porn na-akpali akpali site n'aka smartphone dị n'aka ga-eme ka ọ dị mfe iji eji ike eme ihe karịa ịchọpụta ndị mmekọ na ndụ n'ezie wee gbalịsie ike soro ha nwee mmekọahụ. Anyị na-eme ike anyị niile iji nyere aka n'ịkụziri ndị nta akụkọ na mpaghara a.
Iwu ọhụrụ a ga-abanye na njedebe n'afọ a. Ọkachamara mara mma ma doo anya nke enyi anyị John Carr kọọrọ akụkọ banyere ihe kpatara nke a ji bụrụ ihe dị mkpa ma dị mma maka ụmụaka na UK.
Dịka ọrụ ebere nke nwere mmekọrịta ịhụnanya na isi nke ihe anyị na-akụzi, anyị chere na ọ bụ ihe ziri ezi ikwu banyere ọpụpụ nke Kenneth John na Doris Ivy Mead, ndị nne na nna nke onye nkwụnye ego nke Reward Foundation, Darryl Mead. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu na anyị sonyeere ha n'Australia iji mee ememe ụbọchị agbamakwụkwọ 74th na 19 nke February n'afọ a. Naanị izu atọ ka e mesịrị, Ken nwụrụ n'ụra ya n'oge obi ụtọ nke afọ 94. Dot, 93, bụ nwanyị bi na Ken, nwụrụ n'ụra n'ụra ụra ya gara aga na Thursday, 8 izu ruo ụbọchị mgbe ọ hụrụ n'anya. Ọ gwara anyị na ọ gaghị enwe ike ịnwụ n'enweghị ya.
Ọ bụ ihe ùgwù ịmara ha abụọ, ịhụ nlekọta ịhụnanya na nrubeisi n'omume kamakwa ọ na-atọ ụtọ na ha mara mma, na-akwado nkwado, ụlọ ọrụ. Anyị ga-atụle ihe nlele ọchị nke Ken na nkeji okwu ahịrị anya, na ntụpọ dị jụụ nke Dot.
Mgbe m jụrụ Dot n'ụbọchị agbamakwụkwọ m na Darryl na 2012, gịnị bụ ihe nzuzo nke alụmdi na nwunye obi ụtọ dị ogologo, ọ zara, sị, "Ya adịla mgbe ị ga-arụ ụka. Enweghị ihe ọ bụla ị ga-arụ ụka banyere ". Enwere m obi ụtọ na m ga-esi na nne nne di ya nke hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma hụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ dịghị mma karịa nke ahụ.
Ị na-enweta ozi email a n'ihi na ị nabatara na weebụsaịtị www.rewardfoundation.org.
Adreesị nzipu ozi anyị bụ:
Ụlọ ahụ na-ekpo ọkụ, 5 Rose Street
Ị nwere ike melite mmasị gị or wepu aha na ndepụta a.